Codkawaamo.com » Madaxweyne Xasan Sheikh oo kulan la qaatay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya
Madaxweyne Xasan Sheikh oo kulan la qaatay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya Dec 23, 2012 - Comments off	Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya oo safar Shaqo ku joogo dalka Kenya ayaa Jaaliyadda Soomaalida ee Kenya u sharaxay heshiiskii ay kala saxiixdeen madaxweynaha Kenya.
Kulan uu la yeeshay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya ayuu uga warbixiyay heshiisyadii ay kala saxiixdeen labada madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo Mowaay Kibaaki ,kaasoo salka ku hayay Iskaashiga caalamiga ah iyo xiriirka saaxiibtinimo ee u dhaxeeya labada dal iyo tan shacab soomaaliyeed iyo Kenya.
Sidoo kale Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hoosta ka xariiqay in shacbiga Soomaalida ee Kenya ku nool in aad looga tixgaliyo,, isagoo Jaaliyadda u ifiyay waxa keenay dhibaatooyinka maalmahan soo laab-laabtay sabab u ahaa.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowadda Kenya ay kala hadleen dadka Qaxootiga Soomaalida ah ee la sheegay in Soomaaliya dib loogu celinayo, isagoo tilmaamay in arrintaasi iminka aysan suurtagal aheyn, maadaama dadkaasi Qaxootiga ah ay helaan tasiilaadkii ay u baahnaayeen, sidaa datreedna aan dib loo celin karin inta dowladda Soomaaliya ay uga diyaarineyso Imkaaniyaadka ay u baahan yihiin.
Kulanka uu madaxweyne Xasan sheekh laqaatay Jaalliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayaa ah kii ugu horeeyay ee uu la yeesho,waxayna rajo gelisay khudbadiisa dhammaan Soomaalidii ku sugnayd Magaalada Nairobi Taasoo maalmihii ugu dambeeyey ay dhibaatooyin kala kulmayeen Ciidamada Booliska ee Dalka Kenya kadib markii qaraxyo isadaba joog ah ay ka dhacayeen gudaha dalkaasi gaar ahan xaafada ay soomalida ku badan tahay ee Islii.
« PreviousDaawo maamulka Kismaayo oo bilaabay dayactirka wadada dheer ee aargada	Next »Dadka dagan xeebaha Puntaland oo loogu baaqay in halkaasi ay ka fogaadaan	Fagaaraha, Dood wadaag dhexmartay Dumar Somaaliyeed	Qiilmawaaye Golden Beach, iyo Labo iyo Labaatan sanno kadib	Wareysigii Ugaas Adan Boqow, kadib markuu ka soo noqday Magaalada Kismayo	Sheikh Shakuul oo sii labo laabay ololahiisa musharaxnimada Daawo DAMAASHAADKA JIMCAHA EE XEEBTA KISMAAYO -LIIDO	Abwaan Ali Dhoof iyo gabaygii uu ugu jawaabay seefta banaanka	Ali Siciid NacNac, oo ka hadlaya adeegga cusub ee shirkadda Xawaalada Tawakal Kullankii Xisbiga Waamo Ind.Poeple ay ku qabteen Nairobi Kenya Miyaad garaneysaa dadkii ugu horeeyay oo deegaan ka askumay magaalada Wajeer-Kenya	Daawo Geela Australia oo la iska laanayo halka annuna isku layno	Daawo Ugaas Aadan M.Hussein “Boqow” oo ka hadlay masiirka Gobolada Jubbooyinka	Dugsiyada Galdogob & Galkacyo daawo Daawo saxiixayaashii shirkii Kenya ee 2002	SOO DHAWEYNTII MUDANE Ismaciil X.WARSAME	Marna waa Faturad Marna Waa Diyaarad	Daawo doodii Royal TV.ay u qabatay Reer Waamaha UK.	Hareri iyo Hargeysa	Areey Xaa kuu baxay	CILMI BOODHARIO IYO JACEYLKIISII HODAN	Search for:
faah faahin ku saabsan iska hor imaadkii ka dhacay taleex
Xildhibaano gaaraya 120 oo ku shirey Xamar Warmurtiyeedna kasoo saarey, Akhri war murtiyeedkooda
Tacsi Tiiraanyo leh, waxaa Geeriyooday Aabe Marxuum Mohamed Haji Awad
SOMALIA: Turkey’s Favori LLC to assume control of Mogadishu Aden Adde International Airport.
Madaxweyne Axmed Madoobe oo shir la yeeshay odayaasha dhaqanka ee beesha mudulood(sawiro)